Yonke into eyaziyo malunga nokwabelana kwescreen kunye nesilayidi kwi-iOS 11 | IPhone iindaba
Yonke into inokwazi malunga nokwabelana kwescreen kunye nesilayidi kwi-iOS 11
UAlvaro Fuentes | | Ezahlukeneyo
Nge Ukufika kwe-iOS 11 Siza kuba nakho ukonwabela iinguqulelo ezintsha zeempawu ezimbini zenkqubo yokusebenza kweApple kwiifowuni eziphathwayo: i umbono owabelwanayo kunye isilayidi ngaphaya. Ngoku, zombini zenziwe ngokutsha kwaye zinamandla ngakumbi, kodwa zinzima kakhulu. Kuba zazisiwe kwi-iOS 9 bakhulelwa njengendlela elula yokujonga usetyenziso olufanayo ngaxeshanye.
Ngoku, baye baba iimpawu ezibalulekileyo, esivumela ukuba sirhuqe imifanekiso, amaxwebhu, isicatshulwa kunye nee-URLs phakathi kwezicelo ezahlukeneyo, kunye nokusebenza ukuya kuthi ga kwisicelo esinye kwiscreen esinye ngaxeshanye.
1 Isilayidi ngaphaya kwe Ukwabelana ngescreen
2 Izimbo zomzimba ezahlukileyo
3 Yongeza usetyenziso lwesithathu
Isilayidi ngaphaya kwe Ukwabelana ngescreen
Ukwabelana kwescreen ngokusisiseko kubandakanya zineapps ezimbini ezahlukeneyo (okanye iiwindows ezimbini zeSafari) ekwabelana ngescreen esinye, ngamacandelo alinganayo, kunye nomgca wokwahlula onokushenxiswa ukuba ukhethe isahlulo sepesenti engamashumi amahlanu okanye umyinge wamashumi asixhenxe anamashumi amathathu eepesenti. Ngokungafaniyo nokwenzekayo kwi-iOS 9 nakwi-iOS 10, eli nqaku kwi-iOS 11 livumela ukwahlula amashumi asixhenxe anamashumi amathathu ukuba kwenziwe ngokungafaniyo kwicala ngalinye lesikrini. Kude kube ngoku, icandelo elincinci belingabekwa kuphela kwicala lasekunene.
Kwelinye icala, iSilayidi esingaphezulu siqulathe beka ifestile yesicelo edada ngaphezulu kwezinye ii -apps ezivuliweyo. Oku kusondele ekusebenziseni iMac kuba inokuphathwa ngokungaphezulu njengefestile kwaye igubungela yonke into engemva kwayo, kodwa ungashenxisa nefestile ukuyenza inyamalale kwiscreen. Eli nqaku lijolise ekukhawuleziseni ukubuza into kwisicelo esinye esivulekileyo ngelixa usebenza nomnye. Umzekelo, ngelixa siphendula umyalezo, singatsala uxwebhu kwisicelo. Isilayidi esingaphezulu sinokuba siscreen ekwabelwana ngaso ukuba uyafuna.
Izimbo zomzimba ezahlukileyo
Kuxhomekeka kwindawo otsala kuyo usetyenziso lwesibini, uya kufumana iziphumo ezahlukeneyo. Ukuba urhuqa isicelo kwaye usitsale ngaphezulu kwesinye, singena ngqo kwiSilde ngaphezulu komsebenzi. Ukuyiguqula ibe siscreen ekwabelwana ngaso, kuya kufuneka ucofe kwithebhu ephezulu ngaphezulu kwepaneli.
Kwinguqulelo yangoku yeBeta, ipaneli yeSilayidi esingaphezulu uhlala evela ngasekunene ukusuka kwiscreen, nokuba uyarhuqa kwaye ulahle usetyenziso kwicala lasekhohlo. Kwakhona, awungekhe uswayipe i-app ngasekhohlo kwesikrini ukuze uyilahle. Unokwenza oko kuphela xa uvule usetyenziso olungasekunene (kwaye ngamanye amaxesha uswayipha umva usiya kwicala lasekunene izakubuyisa loo app, njengakwi-iOS iOS 9 kunye no-10).
Ukubeka usetyenziso lwesibini ngokuthe ngqo kwimowudi ekwabelwana ngayo yesikrini, kufuneka irhuqelwe ngasekhohlo okanye ngasekunene, kude kube sekupheleni. Iwindow ephambili iya kuncipha kancinci kwaye ibar emnyama iya kuvela kwicala lesikrini. Emva koko kufuneka yeka usetyenziso kuyo ukuyivula kwimowudi yokwahlulahlula isikrini. Ngokungafaniyo nokwenzekayo kwiSilayidi esingaphezulu, oku isebenza kuwo onke amacala, zombini kunye neapps esekunene enye ngasekhohlo.
Yongeza usetyenziso lwesithathu
Ukuba sinenye yePad Pro entsha, iwindow yesithathu inokongezwa kumxube. Mhlawumbi sibhloga kwipaneli enye kwaye sifunda izingqinisiso ezahlukeneyo zeSafari kwenye… kwaye sifuna ukongeza ifoto. Kule meko, umzekelo, siza kubeka i-Ulysses kunye ne-Safari kwiscreen sokwahlula kunye Siza kutsala iiFoto phezulu. Apha kufuneka silumke ukuba i-app yeefoto "ayiwi" kuyo nayiphi na enye iiphaneli ezimbini ezivulekileyo, kuba kule meko siza kufaka isicelo esivulekileyo ngale sicelo sesithathu.
Kubonakala ngathi ekugqibeleni iApple inike ukutyhala kwezi zinto zimbini ziluncedo kubasebenzisi. Ndiyathemba ukuba baya kuqhubela phambili kwaye bacoceke nangakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Yonke into inokwazi malunga nokwabelana kwescreen kunye nesilayidi kwi-iOS 11
I-Apple isungula iBeta 3 ye-iOS 11, i-tvOS 11 kunye neMacOS ePhakamileyo yeSierra
Ungazikhuphela njani iividiyo zikaFacebook kwi-iPhone